Undlela zimhlophe umfo kaNgcobo - Bayede News
Umbonga kufanele oPhezulu uHhash’elimhlophe kwazise akuwona umdlalo ukuqhuba iminyaka engaphezulu kwengama-44 udonsa emculweni okuwumkhakha odume ngokuba nezikhisi uma usemehlweni abantu. Kubuye kube into engandele bani ukuzithola ubusiswe ngonkosikazi uLinah Khama, owayedume ngelika-Ebony, ohlale emgcine esemgqeni. Ngaphezu kwalokho futhi babusiswe ngabantwana abahanjelwa kahle izinto emaceleni. Lo mculi kamaskandi okwazi ukungena khaxa kunoma isiphi isigqi, umatasa nokulungiselela ukukhipha iSingle esihloko esithi “UJehova” evela ku-albhamu yama-29 ethi “Amawazawaza”. Ngokwakhe ufuna kuthi kushaya iPhasika abantu bebe sebeyazi ukuze bambongise uNkulunkulu ngokumgcina nokumthanda kwaze waficwa yilesi sikhathi. “Umuntu uma ebuka emuva ngiqala ukungena emculweni ngowe-1975, kwakungelula.
Ukhumbule ukuthi umuntu wayezisukela emakhaya kwesikaBiyela eMpangeni ngiyozama inhlanhla eGoli. I-albhamu yokuqala ayenzanga kahle ezimakethe kodwa ngokubekezela, ukuzikhandla nokuhlale ngibeke ithemba kuJehova, umuntu usayibambile,” kusho uHhashi, ogama langempela uBheki Ngcobo nobeqeda iminyaka engama-60 afika emhlabeni ngoZibandlela. Eqhuba uthe: “Kumqoka ukuthi ngikujabulele ukuthi sengiqeda unyaka wama-44 ngikhona emculweni oke ube nezivunguvungu. Abanye ozakwethu ababanga nayo inhlanhla yokuhamba indlela ende kangaka. Umusa kaNkulunkulu osangihlengile. Uma uqaphela ngingumaskandi osezintweni ngoba isikhathi somculo wamanje ngiyakwazi ukuhambisana naso ukuze ngingasaleli emuva.
Okunye engikholwa wukuthi kuyangisiza ukuthi umculo engiwuphakela abalandeli bami ngizinika isikhathi uma ngiwenza ukuze ngingakhiphi into ezokhohlakala ngokushesha.” Uthe kule Single usebenzisane nendodakazi yakhe endala uNtombi esaganela kwaMzobe wabuye wapika nabafana abashaya isigqi seHouse, iMega Drum. Uthi izokwazi ukudanseleka nokushaya indlamu kuzokwenzeka. Okunye okuhlalukayo ngempumelelo kaHhashi ukuthi bawumndeni omesabayo nomdumisayo uMvelinqangi nokufakazelwa ukuthi kwamanye ama- albhamu akhe unazo izingoma ezibonga ubukhona baKhe. “Umkami unguMbhishophi ebandleni lakhe iGod’s Pearl Ministries Church eliseGermiston eGoli. Uyisisekelo empilweni yami. Sinenhlanhla yokubusiswa ngabantwana abamhloniphayo uJehova nababathandayo abantu.
Ngike ngincokole uma ngimenyiwe ukuyonandisa emphakathini ngithi abantu abongithinta ngibacobelele ukuthi ngenza kanjani ukuthi ngibusiswe ngabafana ababili namantombazane amabili.” Lezi zingane akhuluma ngazo zingamaciko ngokwazo njengoba zake zasungula iqembu likamaskandi Amaponi ngowe-1998 elashisa izikhotha. UNtombi wahlangana nodadewabo uVusiwe abafowabo uNkosinathi noJabulani Amadodana avamise ukulekelela uyise uma enandisa bukhoma. UNtombi usebonakale kaningi engumethuli wezinhlelo kuthelevishini kanti njengamanje unohlelo kuMetro FM, i-Epic Sunday, ngezimpelasonto. UVusiwe usebenza enkampanini yabameli iCliffe Dekker Hofmeyer njengoba egabe ngeziqu zomthetho azithola e-University of Johannesburg. Ugxile ophikweni lweFinance and Banking. Ubuye abonakale ethula isibhakela kuSABC 2.
Amajuba amabili esigqi sase-Afrika
Usuka kude uHhashi njengoba waqala ngokushayela isigingci iqembu lombhaqanga iMthembu Queens. “Imina engangizihola phambili ngolead guitar. Ngaphambi kokujoyina Imitshotshovu, iSoul Brothers, kune albhamu engayikhipha esihloko esithi “IHhashi Elimhlophe” lapho ngasebenzisana noJabu Sibumbe wodumo lokuxebula ubass kuStimela. Kodwa i-albhamu esihloko esithi “Hololo” yangivulela iminyango eminingi njengoba ngahambela amazwe omhlaba,” usho kanje. Ukukhombisa ukuthi ithalente into yakwaNgcobo kubonakale ngesikhathi uHhashi ethola ukudlaliswa indawo yokuba iNkosi uNdukuzakhe ku-Ifalakhe ebikhonjiswa kuMzansi Magic. UHhashi ubelandela umkakhe naye obonakale edlala indawo kaMhani Tsakani Baloyi kuGiyani-Land of Blood. Phakathi kwabaculi uHhashi asesebenzisane nabo kubalwa uPhuzekhemisi noMfaz’Omnyama, abasungula iqembu Izinqunqulu Zomhlaba. Lokhu kuhlangana kwabo kwawubeka phezulu umaskandi owawududulwa uBhodloza Nzimande oKhozini FM.
Kubaculi bakamaskandi uhamba yedwa ngokupikwa abaculi abanohlonze abanjengoYvonne Chaka Chaka, uDon Laka, iSoul Brothers, u-Arturo Lledo waseSpain, uJabu Khanyile, iBrothers of Peace, iMalaika, uDJ Oskido, iMafikizolo, iBoom Shaka, uZola, uBusi Mhlongo, iBongo Muffin, iDream Team noSbu “Ama-Lawyer” Ntshangase. Wanyelwa inyoni esandleni ngokuqokwa ukunandisa emcimbini kaMiss World Beauty Pageant owawuseSandton Convention Centre eGoli ngowezi-2008. Wayekhona ohlwini lwekhethelo lwabacula emcimbini wokusonga i-2010 Fifa World Cup okwakukhona kuwona izihlabani ezinjengoShakira. Ngenhloso yokubuyisela emphakathini uHhashi uqale umzungezo wokuhlwaya ikhono. Amaciko asafufusa acula umaskandi abhekwa KwaZulu- Natal, e-Eastern Cape, eMpumalanga naseLimpopo.
Bayede News Mar 13, 2020